WINE 6.0.1 inowedzera rutsigiro rweApple A1 uye inowedzera zvigadziriso | Linux Vakapindwa muropa
WINE 6.0.1 inowedzera rutsigiro rweApple A1 uye inowedzera zvakagadziriswa
Kuverenga iyi WineHQ post ini ndakadyara zvinhu zvishoma. Kunyangwe patinoburitsa zvinyorwa biweekly Isu tinotsanangura kuti idzo shanduro dzekuvandudza, mumifananidzo isu hatiratidze zvakadaro, saka zvinogona kuvhiringidza. Hongu tinoiwedzera mushanduro dzakagadzikana, asi ini ndinofunga hazvikuvadze kuzviita zvakare mune dzekusimudzira. Zvese izvi zvinouya mupfungwa dzangu ndichifunga kuti zvinhu zvinogona kuvandudzwa, uye ndakafunga nezvazvo mushure mekutanga kwe WAINI 6.0.1 , que zvanga zva isa maawa mashoma apfuura.
Kuti iite kuti iwedzere kujekesa, WineHQ inoburitsa huru yekuvandudza gore rega, panguva iyoyo inoenderera ichivandudza inotevera inotevera vhezheni. Shanduro dzekuvandudza, kana zvakanyanya shanduro dze "Staging", dzinoburitswa vhiki mbiri dzese, mazuva manomwe ega ega nguva pfupi isati yaburitswa yakagadzikana, pavanonzi Regedza Musarudzo. Zvichakadaro, chirongwa inogona kuburitsa zvigadziriso, sanhasi. Uye nezve izvo zviri nani, ndinofunga zvakati fananei neLTS software kana zvinoitwa neLibreOffice: iyo yakakwira manhamba, anowedzera mabasa, asi panogona kunge paine zvipembenene zvakawanda. Semuenzaniso, kune ma gamers shanduro dzekuvandudza dzinogona kunge dziri nani, asi avo vanovimba nechirongwa chakatotsigirwa chinoshanda nemazvo vanofanirwa kugara mune dzakagadzikana.
WINE 6.0.1 inosvitsa inopfuura zana shanduko
Izvo zvinoshandura zvishoma kubva mukuvandudza shanduro (uye maRC) ndizvo zvavanoburitsa. WineHQ inotaura mashoma shanduko seanonyanya kukosha, uye pakati peaya anosanganisira WINE 6.0.1 inosimbisa iyo WINE64 kutsigira paApple M1. Kune zvese zvimwe zvinhu, ivo vakagadzirisa makumi matanhatu nemasere uye vakaita makumi mana neshanu shanduko. Kana iri software iyo ichavandudza neiyi yekuvandudza, isu tine zvigadzirwa kubva kuAdobe, Skyrim SE, Deer Hunter, Iyo Witcher 63, Nyika yeMatangi uye Far Manager, pakati pezvimwe zvakawanda zvinoshandiswa nemitambo.
Vashandisi vanofarira kuisa WINE 6.0.1 vanogona kuzviita nenzira imwecheteyo pamwe neshanduro dzekuvandudza: izvi y iyi imwe link pane mabhinari, uye kubva ku kurodha peji Ivo vanotiudza maitiro ekuiisa kuburikidza repository kana pane mamwe masisitimu anoshanda. Kana isu tikasarudza iyi yekupedzisira sarudzo, zvinoenderana nesisitimu yekushandisa isu tichafanirwa kusarudza rakatsiga bazi. Tichifunga nezve kuti 6.0.1 ishanduro yakagadzikana, zvingangoita kuti mapakeji nyowani achaonekwawo mumahofisi epamutemo ezvimwe zvekugovera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » WINE 6.0.1 inowedzera rutsigiro rweApple A1 uye inowedzera zvakagadziriswa
GNU / Linux: Nzvimbo dzeDesktop ... zvinoshamisa!